Ubulungisa beMithombo yeendaba kuLuntu kunye nokuBuya kuTyalo mali | Martech Zone
NgoLwesine, uJuni 2, 2011 Lwesine, Okthobha 27, 2011 Douglas Karr
UGary Vaynerchuck ngokukhawuleza iba ngumvangeli omnye kwimidiya yoluntu endihlala ndimisa ukumamela, ukulandela, kunye nokuvumelana nayo. UBryan Elliott kutshanje ndenze udliwanondlebe noGary kwicandelo lamacandelo amabini endinokukhuthaza wonke umnini-shishini… ukusuka kumncinci ukuya kwi-CEO… ukumamela.
Inqaku elinye kudliwanondlebe lindibethile- kwaye andiqinisekanga ukuba bekukho ukugxininisa ngokwaneleyo kulo dliwanondlebe. UGary wathetha malunga neenkampani ezibeka ubulungisa kwimidiya yoluntu. Abathengisi kunye neenkampani zihlala zikhangela ukubetha ngokukhawuleza, iphulo elinembuyekezo enkulu kutyalo-mali lokuthengisa. Ndiyakholelwa ukuba amashishini ngokwenyani afuna ukucinga ngendlela yemidiya yoluntu ngokwahlukileyo.
Ndihlala ndisithi ukubhloga ngumdlalo weembaleki, hayi okokubaleka. Ndinabaxhasi ngoku abanxungupheleyo kuba, emva kweenyanga ezininzi, ababoni mbuyekezo inkulu ibhengezwa ngabanye kolu shishino. Babona ukukhula kunye nesantya, nangona… kwaye yile nto sigxile kuyo.
Kufana nokubeka imali kwiakhawunti yakho yomhlalaphantsi kwaye ulindele ukuthatha umhlala phantsi kwiminyaka embalwa. Ngaba kunokwenzeka? Ndicinga ukuba ungabetha isitokhwe esiza kuqhuma .. kodwa ngawaphi amathuba ?! Inyani yile Yonke i-tweet, yonke iposti yebhlog, yonke impendulo ye-Facebook… kunye nokulandelayo okufumanayo… lutyalo-mali oluncinci kwikamva leshishini lakho. Yeka ukufuna ulungiso kwangoko.
Njengeakhawunti yakho yomhlalaphantsi, jonga iintsingiselo kwaye uqiniseke nje ukuba ikhokelela kwicala elifanelekileyo. Ngaba ukhula ulandelayo? Ngaba ufikelela kubantu abaninzi? Ngaba ufumana ukukhankanywa okungakumbi, ukuthanda kunye nokubhala kwakhona? Zonke ezi zii-nickels, iipennies kunye nee-dimes ezifakwe kwiakhawunti yakho yemicimbi yezentlalo.
Ngokwam ndiqale ngemithombo yeendaba kwezentlalo malunga neminyaka elishumi eyadlulayo kwaye bendityala imali veki nganye, ukuba ayisiyiyo yonke imihla. Abanye abantu bayamangaliswa kukukhawuleza kweshishini lam, Highbridge, ikhulile. Iofisi yethu ivule ixesha elingaphezulu konyaka kwaye besisoloko sisisigxina kangangeenyanga ezili-18. Sinabasebenzi abasisigxina aba-3 nangaphezulu kweshumi elinambini leenkampani ezisebenza ngokusisigxina esisebenza nazo mihla le. Sinabathengi abasuka eNew Zealand, kulo lonke elaseYurophu nakuMntla Melika.
Khange ndiyakhe le nkampani kunyaka okanye emibini. Ndiyakhile inkampani kule minyaka ilishumi idlulileyo, kwaye ndakha ubuchwephesha kwesinye ishumi leminyaka ngaphambi koko. Iminyaka engamashumi amabini yotyalo-mali kum nakwindawo endikuyo kwi-Intanethi phambi kokuba Ndakha ndavula iingcango zeshishini lam! Ifuna umfutho, umonde, ukuthobeka… kunye noxinzelelo olungapheliyo ukuze uphumelele.
Ukuba inkampani yakho iqala ukutyala imali kwangoko, kunokuba ibe mva, amathuba okuba inkampani yakho yomelele kwaye ibe noluntu oluthembekileyo lwabathengi kunye nabalandeli mhle. Qalisa ukubeka ubulungisa kwimidiya yoluntu namhlanje kwaye awuyi kuphoswa. Njengoko uGary esitsho, lonke utshintsho kwimidiya yanamhlanje- ukusuka kumaphephandaba, amaphephancwadi, unomathotholo nomabonwakude, zingcwabe iinkampani ezingakwaziyo ukuziqhelanisa. Ukuba inkampani yakho igqiba ekubeni ingatyali mali, kulungile. Abo bakhuphisana nabo baya kuthi.
Umngcipheko wokugqibela. Ukuzama ukuthatha umhlala phantsi kwi-65 xa uqala ukonga kwi-60 akusebenzi. Kananjalo ayizukutyala mali kwimidiya yoluntu. Iinkampani kufuneka zitshintshe ngokusisiseko indlela ezijonga ngayo kwimidiya yoluntu, ukukhangela (okuchaphazeleka luluntu) kunye nentengiso kwi-Intanethi ukuba bahlala ekhaya ukuze baphile ngomso. Le ayisiyondawo.
Iindudumo zibulala i-iPhone
Jun 8, 2011 ngo-11:22 AM
Le yindlela ebendiziva ngayo kwezi veki zimbalwa zidlulileyo. Kuyahlaziya ukubona imbono yakho koku kunye nokuqonda ukuba iinzame zemidiya yoluntu zithatha ixesha nakwimeko 'yokusabela NGOKU'!
Ndibhale nje iblogi malunga neenkxalabo zam ngaphambi kokufunda le! Ndiyifunde kwakhona emva kokufunda iposi yakho kwaye ndabona ukuba ndibhalile- "Ndicinga ukuba i-HIARDEST inxalenye yokuqondisa iinzame zemidiya yoluntu ifuna iziphumo ezikhawulezayo kwihlabathi lokuphendula ngokukhawuleza!" (http://bit.ly/l5Enda).
Enkosi ngeposti Douglas! KUBUKELELWE KAKHULU!
Aug 1, 2012 ngo-7:58 PM
Ulungile! Amanye amashishini abona imidiya yoluntu ngokwahlukileyo. Ewe, kuthatha inzame ezininzi kunye nexesha ukuvuna oko ukuhlwayeleyo.